Israa’il oo Weerar Culus ku qaaday Ilhan Cumar oo ka tirsan Aqalka Kongres-ka Mareykanka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaIsraa’il oo Weerar Culus ku qaaday Ilhan Cumar oo ka tirsan Aqalka Kongres-ka Mareykanka
Israa’il oo Weerar Culus ku qaaday Ilhan Cumar oo ka tirsan Aqalka Kongres-ka Mareykanka
Hiiraan Xog, Tan iyo markii ay billaabatay doodda la xiriirta hadalladii lagu tilmaamay “Yahuud Naceybka” ee Ilhaan Cumar ay ku qortay boggeeda Twitter-ka, ayaa warbaahinta Israa’iil waxay si weyn uga hadlayaan gabadhan Soomaalida ah ee taariikhda gashay kaddib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Muslim ah ee xubin ka noqotaa Aqalka Kongres-ka Mareykanka.
Wargeysyada Israa’iil ayaa si weyn uga hadlayay hadallada ka soo yeeray Ilhaan Cumar, oo qaarkood ay ka qoreen faallooyin, qaarna ayba billaabeen warar ay ku doonayaan inay ku muujiyaan in Ilhaan ay tahay qof Yahuudda neceb.
Wargeyska Hareetz ee ugu afka dheer Israa’iil ayaa qoray faallo dheer oo uu cinwaan uga dhigay: “Ilhaan Cumar waxay fahmi la’dahay sababta ay dadka Maraykanka u taageeraan Israa’iil”.
Faalladan waxaa ku xusan in Ilhaan ay u maleynayso in lacag caddaan ah lagu helay taageeradaasi, waxaana maqaalka lagu xusay in Ilhaan aysan lahayn dareen siyaasadeed.
Wargeyska ayaa sheegay in Ilhan ay sida Falastiiniyiinta u marin habawsan tahay oo ay u haysato in lacag oo keliya ay Israa’iil ku kasbatay taageerada Maraykanka, taas oo ay ku tilmaameen aragti aan fogeyn.
Waxay faalladu sheegtay in loo baahan yahay in Ilhaan Cumar ay fahanto in dadka raacsan madhabta Evengelisti-ga ee Maraykanka ku badan, oo siyaasiyiintuna u badan yihiin, ay taageero buuxda u hayaan Israa’iil.
Qarax miino oo lagu weeraray ciidamo ka tirsan AMISOM